Somaliland: Ciidamada RRU-da Oo Saq-dhexe Gurigooda Oo Hargeysa Ku Yaala Kala Baxay Saddex Wiil Oo Walaalo Ah+Magacyada Saddexda Wiil - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Ciidamada RRU-da Oo Saq-dhexe Gurigooda Oo Hargeysa Ku Yaala Kala Baxay...
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee RRU-da oo kaashanaya ciidamka Baadhista danbiyada ee CID-da ayaa habeenimadii Jimcaha ee ina soo dhaaftay waxay saq-dhexe ugu daateen guri ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaana xaafadda Siiney oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax.
Waxaana ay gurigaasi ciidamadu kasoo qabteen saddex wiil oo walaalo ah oo ku noolaa gurigaasi,kuwaas oo mid ahaan oo haystay meherad ganacsi .
Ilo wareedyo xaafadaasi ku nool ayaa noo xaqiijiyay magacyada saddexdaasi wiil ee ay ciidamadu saqda-dhexe kala baxeen gurigooda,waxaana ay magacyada wiilashu ay kala ahaayeen Deeq Maxamed Maxamuud, Mawliid Maxamed Maxamuud iyo Asad Maxamed Maxamuud ,waana saddex wiil oo walaalo ah sida magacyadooda ka muuqata.
Saddexdan wiil ee ay ciidamada RRU-du kala baxeen gurigii ay daganayaan ayaan la garanayn sababata keentay in lala baxo saddexdaasi wiil oo mid kamid ah uu uu xaafadda Siiney ku haystay tukaan oo ku ganacsan jiray.
Ilo wareedyo u dhuun daloola ayaa waxay noo sheegeen in saddexdan wiil mid kamid ah oo sanadihii u danbeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho isla markaana uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa,walina waxa lagu wadaa baadhis iyaga oo saddexdaasi wiilna ku xidhan yihiin xarunta dambi baadhista Somaliland ee CID-da.
Gabagabadiina ilaa hadda si rasmi ah loo garan maayo sababta ay ciidamada RRU-du u xidheen saddexdaasi wiil ee walaalaha ah.